११ दिनको अस्पताल बसाई पश्चात घर फर्किएर आराम गरिरहेको छु । कोभिड १९ का सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएका छन् । – Complete Nepali News Portal
११ दिनको अस्पताल बसाई पश्चात घर फर्किएर आराम गरिरहेको छु । कोभिड १९ का सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएका छन् ।
ScotNepal November 15, 2020
हास्य कलाकार मनोज गजुरेल ले कोरोना जितेर अहिले आफ्नै घर फर्किएको खुसी खबर शेयर गर्नु भएको छ : उहाको स्टाटस जस्ताको तस्तै : शिघ्र स्वास्थ लाभ को कामना !
धन्यवाद तथा आभार ? ११ दिनको अस्पताल बसाई पश्चात घर फर्किएर आराम गरिरहेको छु । कोभिड १९ का सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएका छन् । केही दिनमा पुर्ण स्वस्थ्य भएर काममा फर्कनेछु । यस क्रमममा अत्यन्तै उच्च स्तरको उपचार सेवा प्रदान गर्ने नेपाल एपिएफ अस्पताल परिवार, परिवारका सम्पुर्ण सदस्यहरु तथा सबै शुभचिन्तकहरुलाई अन्तरमनदेखी नै धन्यवाद ? सकेसम्म यो महमारीबाट आफू जाेगिअाैँ । अरुलाई पनि जाेगाअाैँ
। दिपावलीको सबैलाई शुभकामना ।